उडान भरेको ५ मिनेटमै ७१ यात्रुसहितकाे रूसी विमान दुर्घटना :: a1nepal.com.np
मस्को, २९ माघ । रुसमा ७१ जना सवार विमान उडान भरेको ५ मिनेटमै दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । रुसको राजधानी मस्कोबाट काजाकिस्तानको सीमानामा रहेको ओस्र्क शहरका लागि उडेको एन्टोनोव ए.एन.–१४८ नामक विमान मस्कोकै बाहिरी इलाकामा दुर्घटनाग्रस्त भएको रुसी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
विमानमा ६५ जना यात्रु तथा ६ जना चालक दलका सदस्य रहेको जनाइएको छ ।
एन्टोनफ एएन – १४८ विमान कजाकिस्तानको सीमा नजिकै रहेको उराल्सको ओरस्क गैरहेको थियो । स्थानीय समय अनुसार आइतबार दिउँसो विमान दुर्घटनामा परेको हो ।
दुर्घटाना के कारण भयो भन्ने अझै खुलेको छैन् । विमान दुर्घटना भएको ठाउँमा हिमपात भएका कारण अनुसन्धानकर्ता र उद्दारकर्ताले त्यहाँ काम गर्न असजिलो भएको जनाइएको छ ।
सन् २०१७ लाई हवाई यात्राको सबैभन्दा सुरक्षित वर्ष मानिएको थियो । एक वर्षको अवधिमा पहिलो पटक कमर्सियल प्यासेन्जर जेट दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । विमानमा एक बच्चा र दुई किशोरावस्थाका यात्रु रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
पत्नीको सहमतिबेगर राखिने यौनसम्पर्क वैवाहिक बलात्कार नहुने ‘गाजामा कोही निर्दोष छैनन्’ : इजरायली रक्षामन्त्री लिबरमान के इजरायलबारे साउदी अरबको धारणा बदलिएको हो ? इजरायली नागरिकलाई आफ्नो भूमिमा शान्तिपूर्वक बस्ने पूर्ण हक रहेको साउदी राजकुमारको भनाई इराकमा आइएस जिहादी समूहको अपहरणमा परेका ३९ भारतीयको हत्या श्रीलंकामा मुसलमानविरुद्धको दङ्गाका कारण सङ्कटकाल साउदी सेनामा महिला भर्ना खुला इजरायलमा भेटिएको यो हाडले बदल्दैछ मानव स्थानान्तरणको इतिहास अफगानिस्तानको काबुलमा यस वर्षकै ठूलो हमला अमेरिकाद्वारा प्यालेस्टिनीहरूलाई गर्दै आएको सहयोग कटौती सन् २०१७ को विश्व राजनीति : हाइड्रोजन बमदेखि जेरुसेलमसम्म
← कुन मोडमा पुग्यो एमाले-माओवादी एकता वार्ता ?	पशुपतिनाथमा हिन्दूलाई मात्र प्रवेश किन ? →